Muqaadaradka iyo goobaha cawayska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Tor Johnsson/Scanpix.
Muqaadaradka iyo goobaha cawayska
La daabacay måndag 14 maj 2012 kl 10.54
Qofkii tobnaad ee Swedhiisha ahba ayaa la filayaa in u xidhiidh la yeeshay isticmaalka muqaadaradka, sidaasi waxay ku caday badhitaan lagu sameeyay goobaha cawayska ee loo yaqaano Diskoteegyada, baadhitankan ayaa waxa si wada jir ah u sameeyay, ururka makhaayadaha ee la dagaalanka muqaadaraadka iyo hayadaha sida Bileyska.
Gabadh magaceeda la yidha, Sara Shalabi ayaa ku biirtay ururkan ka hortaga muqaadaradka, iskana leh mid ka mida goobaha cawayska ee magaalada Stockholm, yadoo la hadlaysa wariye ka tirsan Radio Sweden, ayeey sheegtay in ay waxbarasho u gashay sidii ay ku ogaan lahayd dadyoowga isticmaala muqaadaraadka ee u soo caways taga goobteeda cawayska oo ku taal Stockhol.
- Waxaan dhamaystay laba waxbarasho oo la xidhiidha sida loo ogaado calaamadaha dadka iibiya muqaadarada sida ay u eegyihiin, waxay aad ugu baxaan dibada oo ay yidhaahdaan, dibada lee ka soo laabanaynaa markay ku jiraan diskooteega, balse waanu u diidnaa in ay dibada kolba u cararaan, taaso macnaheedu yahay in ay dibada lagu kala iibsado, ayey sheegtay, Sara Shalabi oo ah mulkiilaha nattkuluubka Undici ee ku yaal bartamaha magaalada Stockholm.
Naat kilaabka ay leedahay Sara Shalabi ayaa ka mid ah 40 naat kilaab oo ku biiray ururkan ka hortaga muqaadaraadka lagu iibiiyo goobaha cawayska.
Sara Shalabi ayaa sheegtay in ay yaraatay isticmaalka muqaadaraadka ee gudaha natt kilaabku, sababtuna ay tahay cabsi laga qabo, halka ay sannado ka hor caadi ahaan jirtay isticmaalka muqaadaraadka ee goobaha cawaysku.
Maanta ayaa la soo bandhigayaa tira koob ay sameen ururkan ka hortaga muqaadaraadka ee goobaha cawayska.
Tira koobkan ayaa la su'aalay 1000 qof, natiijaduna ay noqotay in qofkii 10:aad ba u kula kulmay maandooriye goobaha cawayska.
Sida ku cad tira koobkan ayaa waxa isticmaalka muqaadaraadku caadi ka yahay magaalooyinka waaweyn sida Stockholm, Göteborg iyo Malmö.
Dadka ugu badan ee xidhiidh la yeesha muqaadarooyinka goobaha cawayska ayaa lagu qiyaasa in ay jiraan inta u dhaxaysa, 18 iyo 29 sanno.
Dadyoowgan da'doodu u dhaxayso 19 ilaa 29 ayaa dhagahooda ay caadii u tahay maqalka maandooriyaha, maadaamo ay badi joogaan goobahaas lagu caweeyo, ayuu sheegay, Daniel Knutdzon oo ka hawl gala bileyska magaalada stockholm kana shaqeeya qeybta muqaadaraadka ee goobaha lagu caweeyo.
Magaalada Stockholm ayaa waxa ka hawl gala bileys gaadhaaya 5, 6, 7, 8 kuwaas oo badana aan ku lanisan dharka bileyska balse dhex gala dadka isugu yimaada goobaha cawayska sidii ay u qabtaan dadka meelaahas la jooga muqaadaraad, isla markaasna toobabar iyo siiya shaqaalaha ka hawl gala goobahaas.